Qinisekisa ukuphepha uma usiza
UMA udonsa inqola ethwele imoto kumele wenze isiqiniseko sokuthi iboshwe ngendlela Isithombe: Fuelgang-101/Instagram
STHEMBISO SHANGASE | May 24, 2019
KHANYA ma-hazard ethu khanya! Khanya ukhanyisele bonke abalandeli nabafundi bale ngosi, babone ukuthi selufikile usuku olungaliyo kwelakho lodumo lokuwela umfula ugcwele.
Impande yethu yemihla siyiququda nje siyethemba ukuthi bonke abeze ngokuzoncinda kulolu dengezi lwama-hazard sebemi eceleni komgwaqo lapho kuphephe khona ukuze sincinde ngokuphepha nazi izinyamazane nezibiba zomgwaqo.
Awanamhlanje ama-hazard siwashunqisa ngengxoxo ethinta ukuhudula inqola ngemoto encane, hhayi inqola yeloli. Sisanda kuthenga imoto yakudala efile.
Le moto iseGoli, manje sicubungula iqhinga lokuyilanda ngaphandle kwezindleko ezimba eqolo.
Kukhona abathi asiyicelele elolini elithwala izimoto kepha ngenxa yokuthi ngeke ikwazi ukuzifikela esitobhini izogibela iloli. Sibona sengathi iqhinga lokuyithwala ngenqola ewumcengezi oqashwayo kungasiza.
Uma leli cebo lingaphumelela kusho ukuthi kuzodingeka siqashe inqola bese sinikela khona KwaNdongaziyaduma silanda le nsobonsobo esifisa ukuyivusa.
Inqola yokugqogqosha imoto ayifani neyokuthwala impahla. Yona kufanele ibe namasondo amane (double axel) futhi ithi ukubhasha.
Okubalulekile uma uzogqogqosha imoto enqoleni ukuthi uqinisekise ukuthi imoto yakho ikhulekiwe, ayinyakazi wena owabona inkomo iboshelwa esigxotsheni ngenhloko uma izosengwa noma izohlatshwa.
Okunye okubalulekile ukuthi uqinisekise ukuthi imoto elayishiwe iba phambili nenqola ukuze isisindo sayo sicindezele isibhono sokuwuka phezu kophondo lokudonsa.
Yingakho izinqola ezidoswa yizimoto ezincane kuba sengathi zifolile. Zisuke zenziwa yisisindo esikhulu phambili kuze kubhashe nemoto edonsayo.
Uma isisindo somthwalo sisindela emumva iyaqethuka inqola bese iyaluza itshikize kabi lokho okungadala ingozi. Inqola ejanquzayo ingabangela ukuthi imoto eyidonsayo igcine seyitshikiza ngesinqa kanti lokho kungabangela ukuthi inqoduke inqola noma idonse imoto yonke iyokhala esihluthu.
Ijubane lemoto edonsa inqola ethwele into esinda njengemoto akufanele leqe ku-80 km/* .
Lokho kwenzelwa ukuthi imoto edonsayo ibe nethuba lokuma uma kuba khona inkinga kanti futhi ayiyaluzi kakhulu emgwaqweni uma ihamba kancane.
Kuba ngcono ukuthwala imoto ngenqola ehudulwa yimoto encane noma ngabe uhamba ibanga elingakanani njengakho nje ukusuka eGoli uya eNdwendwe, inqobo nje uma uzohamba emgwaqweni wetiyela ongenazo izikhinsi nezisele.
Kulezi zinsuku ngike ngahamba nomfo kaNala waseMlaza, eThekwini edonsa inqola esindayo enamasondo amane (double axel) ngengadlangadla yeveni iFord Ranger 3.2 Wildtrack.
Le nkunzimalanga nayo ibiqikelela ukuthi igcina ijubane lika-80 km/* emgwaqweni onguthelawayeka.
Nayo le moto ibizwela ikakhulukazi lapho kunemibundu yokuthobisa ijubane.
Ngenxa yokuthi lo mbhemu useyijwayele le nto sihambe sonke isifundazwe ngaphandle kwenkinga.
Eminyakeni edlule ngake ngayohudula imoto eyayifele eMatimatolo ngaseMdlovane ngisebenzisa ingqukuvana ebizwa ngeMobijack.
Yona-ke inamasondo amabili kuphela kanti imoto edonswayo ikotela ngamasondo amabili phezulu bese kuthi amanye ahambe phansi.
Ingozi nge mobijack ukuthi uma imoto ijika kuyenzeka itsheke ngendlela eyingozi kucace ukuthi uma ungacophelelanga ingavuka phansi.
Iningi labadlali bezimoto zomjaho nalezi ezishaya izidudla sebejwayele ukuzigqogqosha ezinqoleni ngoba ezinye zazo azinawo amaphepha okuhamba emigwaqweni yomphakathi.
Nabo bayakuqinisekisa ukuthi imoto egqogqoshiwe iboshwa amasondo womane iphinde ibanjwe nangewuku ukuthi ingalinge iveketule noma ngabe imoto eyidonsayo ingena ezikhisini.
Yize kungelona icala ukudonsa inqola ebusuku kodwa izinga lokuphepha liyancipha ebusuku.
Imithetho yezwe ayikuvumi ukuthi imoto egqogqoshiwe ibe nomuntu phakathi noma ngabe uyithwele ngojibha.
Nenqola edonswa yimoto kufanele ibe sempilweni futhi iwuthelele umgwaqo.
Kufanele ikhanye yonke into nama-hazard noma unyathela ibhreki ikhanyise.
Hhayi-ke awuthi siwavale lana ama-hazard ethu sinikele khona kwaNyamakayipheli siyolanda le nsobonsobo ngokuphepha. Nawe-ke usungaqhubeka ushayele ngokubuswa yimithetho elawula ezomgwaqo kuleli zwe ukuze sihlangane sisawuphonsa umbalane nangesonto elizayo kuyo le ngosi.
Uma usafisa siyiqhube indaba ngena ekhasini lethu Igedlela lami with Sthembiso Shangase kuFacebook. Yimi owenu nali ikheli ngezansi [email protected]